Inona no voaray tamin’ny fitsapan-kevitra natao tamin’ny vaomieran’ny vondrom-piarahamonina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Jolay 2019 6:08 GMT
Zavon-tenin'ny valim-panontaniana malalaka tamin'ny fitsapan-kevitra natao ho an'ny Filan-kevitry ny vondrom-piarahamonina Global Voicesl: Inona no lohahevitra mahaliana anao indrindra amin'ny maha-mpanoratra na mpandika teny?
Nandritra ny herinandro vitsy lasa, nandinika ireo vokatra sy valim-panontaniana an-tsoratra maimaim-poana avy amin'ny fitsapana ny hevitry ny Vondrom-piarahamonina izahay ary miasa mba hahatonga ireo tolo-kevitrareo sy ny hevitrareo ho drafitra azo iasàna. Faly izahay mahita fa mifanaraka tsara amin'ireo lohahevitra efatra rehetra ny vokatra avy amin'ny Filankevitra, ary mitondra antsika any amin'ny tari-dalana mazava.
Amin'ny toe-javatra sasany, dia mazava tsara ny valiny ka afaka mampihatra fanovana haingana araka ny tokony ho izy izahay. Amin'ny toe-javatra hafa indray, dia manana safidy mazava momba izay tokony hataontsika isika, saingy mila fotoana hiasàna ny fomba hanaovana azy ireo. Amin'ireo olana ireo, dia miandrandra ny hiara-hiasa aminareo izahay amin'ny fanandramana ireo hevitra sy ny fitadiavana vahaolana.
Indreto ny sasantsasany amin'ireo zava-baovao hitanay manokana fa mahaliana:
Nandefa famantarana mahery vaika ho an'ny Global Voices ny Filankevitra mba hitazonana ireo soatoavintsika fototra sy ireo tena andraikitsika ankehitriny. Nanjaka ireo fanontaniana fitsapan-kevitra izay nanasongadina ny lanjan'ny fisoloan-tena mitovy amin'ny feo sy ny tantara amin'ny haino aman-jery. Nampiseho izany fironana lehibe izany ireo valim-panontaniana mikasika ireo soatoavina tamin'ny fitsapan-kevitra efatra.
Antony lehibe manosika kokoa ho amin'ny fandraisan'ireo mpikambana ao amin'ny Filankevitra anjara ny fitondrana fanovana, mihoatra noho ny fianarana sy ny fampivoaran-tena, na ny fanohanana ny fiarahamonina noho ny antony manokana. Nisongadina izany valim-pifidianana izany tamin'ny valinteny marobe tamin'ny fitsapan-kevitra. Ohatra, tamin'ny valinteny tamin'ny fitsapan-kevitra 1, fanontaniana 3, nilaza ny ankamaroan'ny mpikambana ao amin'ny Filankevitra fa mieritreritra ezaka famoahan-dahatsoratra mahomby izy ireo rehefa mahatratra mpamaky manan-tarakevitra, rehefa mampifandray ny fiarahamonina, ary rehefa mitondra fiovàna mivaingana manerantany isika. Mifanohitra amin'izany, nahazo fanamarihana ratsy ny “tantara novakiana sy nankalazain'ny fiaharamonina.
Fitsapan-kevitry ny vaomieram-piarahamonin'ny Global Voices 1, lohahevitra sy fifantohana, fanontaniana 3: Inona, ho anao, no mamaritra tsara ny ezaka famoahan-dahatsoratra mahomby? Global Voices Community Council Poll 1, Topics & Focus, Question 3: What, for you, best defines a successful editorial effort?
Maniry ireo mpikambana ao amin'ny filankevitra mba hanana rafitra sy fifantohana bebe kokoa ny asa famoahan-dahatsoratra, anisan'izany ny rafitra mifantina izay lohahevitra ifantohantsika, sy ny fanandramana ireo karazana tantara samihafa, sy ny hirika hiasana amin'ny endrika fampitam-baovao hafa. Hita fa mahomby ny safidy hafa fandraisana anjara amin'ny asa mifantoka amin'ny fikarohana maharitra.
Maro amintsika no naneho faniriana handray anjara ato amin'ny GV ho olom-pirenena, fa tsy amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny vondrona na sokajin'olona. Namoaka valinteny manohana betsaka ny maodely maha-mpikambana, fa tsy ny fizarana na ny fanapariaham-pahefana isaky ny faritra ny fanontaniana momba ny rafitra fandaminana.
Maro amintsika no te hanana fahafahana bebe kokoa hitarika sy handray anjara amin'ny tetikasa lalina ary hanana fahafahana hiditra amin'ny asa hahazoam-bola tsindraindray.
Ny Fitsapan-kevitry ny vaomieram-piarahamonina Global Voices 2, Tahan'ny maha-matihanina, Fanontaniana 4: Inona no anjara asa tianao hiandraketana indrindra ao amin'ny Global Voices?
Maro amintsika no mahazo aina amin'ny fanovana ny maodely famatsiam-bola mba ahafahantsika miasa amin'ny loharanom-bola maro isan-karazany, raha toa ka miaro ny fenitra ara-moraly, ny iraka sy ny mari-panondroana antsika.
Maro amintsika no faly amin'ny fiheverana ny fanaovana asa mifandraika amin'ny iraka atao ankoatra ny fandikan-teny.
Ny teboka iray mety hifandirana: raha mankasitraka ny fandraisana anjara, na mitarika ireo tetikasam-pikarohana sy famoahana ny ankamaroantsika, dia te-hahita fifandanjana sy fizarana ara-drariny ny loharanom-bola eo amin'ireo faritra misy antsika sy ny tetikasa isika. Ho sarotra izany, satria ny fitadiavam-bola ho an'ny asa fikarohana sy famoahana kendrena dia tsy azo ihodivirana fa hiteraka loharano bebe kokoa ho an'ny faritra sy lohahevitra sasany. Mila miasa amin'ny fomba tia mamorona isika mba hahitana fomba hamaliana ireo faniriana roa ireo.
Hamoaka lahatsoratra bilaogy hafa tsy ho ela isika amin'ny fanomezana vaovao ho anao mikasika ny fivoaran'ny tetikasa. Aza miala!